Ukutya kwam kwePeruvia-Ukutya kwam kwePeruvia
Ukutya kwam ePeruvian
EPeru lilizwe le EMzantsi Melika ebandakanya icandelo elikhulu lehlathi le-Amazon kwaye liqulathe enye yezona dolophu zindala ze-Inca kwiindawo eziphakamileyo IAndes. Ukongeza, ngumnini weNtlambo eNgcwele, i-Inca Trail ukusuka kumawaka eminyaka eyadlulayo, imisebenzi yezandla ehloniphekileyo kunye nobuncwane bekoloniyali kunye nokugcinwa kwe-archaeological enkulu kwilizwekazi abenza inkcubeko yabo, isithethe kunye nembali ebalulekileyo eyaziwayo.
Ngokunjalo, lo mmandla ngumdali kunye nomanduleli wenye ye ukutya okugqwesileyo emhlabeni, abathetha kwaye banxibelelane neencasa zabo ezizodwa kunye nezimbo ezo mpawu zelizwe labo, uthando kunye nokuzinikela kweetoliki zabo kunye namawakawaka okunokwenzeka ukonwabela ukuhlala EPeru ngalo lonke ivumba kunye nokuluma.
Le gastronomy iseti ye izitya ezikhethekileyo kunye neziselo EPeru eziyinxalenye yobomi obuqhelekileyo kunye nezithethe zabemi bayo, isiphumo sokudityaniswa kwesithethe sokupheka sesixeko esidala kunye ne-European gastronomy kunye namanye amaqumrhu athi kancinci kancinci ahlonyelwe kuyo.
Iresiphi yenkukhu yenkukhu kunye namazambane kunye neetamatato ezibomvu
Inkukhu sesinye sezithako eziphambili zezona zitya zePeruvian gastronomy, ezithi ...
Yehagu Adobo Recipe
Ngaba unokusithelekelela isitya esityebileyo, esigudileyo nesinejusi? Ukuba kunjalo, i-Pork Adobo iya kuba lolona khetho lwakho lungcono. Nokuba ku...
Inkukhu yeSillao ngoyena mbonakaliso mkhulu wegalelo lesidlo saseTshayina sasempumalanga kwincwadi yeresiphi kunye ...
Isuphu ukuya kumzuzu
Isuphu ye-la minuta yisuphu eyenziwe ekhaya engabizi kakhulu, elula kwaye ekhawulezayo ukuyilungisa, eneresiphi yayo ...
I-Chicken Escabeche sisidlo esiqhelekileyo se-Peruvian gastronomy, esifikelele elunxwemeni ...
Imbali yesitya esidumileyo se-noodle ebomvu ibonakala phakathi kweminyaka ye-1840 kunye ne-1880 xa isixa esikhulu ...
Isidlo sakusasa esimangalisayo sabantwana
Nawuphi na umcimbi lithuba elihle lokunika isidlo sakusasa esimangalisayo, kwaye ngakumbi xa esi sidlo simnandi silawulwa ...
I-Carapulca enesuphu eyomileyo
I-Carapulca enesuphu eyomileyo sisidlo sasePeru, ngokutsho kweembali zababhali abaninzi be-gastronomic kunye nabaphandi, ...
I-Patarashca yehlathi sisidlo esimvelaphi yayo ichazwa ngabemi bomthonyama kunye nabemi basePeru ngaphambi ...
Imvelaphi yokwenyani ye-ceviche ayinakuze yaziwe, kuba isitya esiphikisana njengesaso ngamazwe amaninzi ...
Kwangaxeshanye, olu hlobo cuisine yenye Eyona nto ibalulekileyo emhlabeni kwaye umzekelo woku ukutya okudityanisiweyo ngenxa yembali yayo ende yeenkcubeko ezininzi, esekelwe kumxube wolwazi olusisiseko lwePeru yamandulo kunye neSpanishi cuisine kwinguqu yayo eyomeleleyo, ubukho baseAndalusi kunye negalelo lonxweme lweAtlantiki ye-Afrika engaphantsi kweSahara yamakhoboka xa ukufunyanwa kwe indawo yenzeka.
Ehlabathini, i-cuisine yasePeru yeyona nto yahluke kakhulu, apho, ngenxa yencwadi "I-57 ilungele ukuqonda ukuba sinjani thina maPeru” zibalwa ukuya kuthi ga kwi 491 izitya eziqhelekileyo. Kunxweme lwasePeruvia kukho 2500 iintlobo ezahlukeneyo zeesuphu, kunye neziselo zesintu ezingaphezu kwama-250 kunye neziselo zendalo ezingama-70 kunye namalungiselelo otywala. Kodwa, uya kuzibuza ukuba kutheni le mininzi yezitya zikhona? Kwaye impendulo ngumbulelo kwi ijografi yelizwe ukusuka esandleni ukuya esandleni umxube wenkcubeko kunye nokulungelelaniswa kwezinye ii-eruditions zakudala kwi-cuisine yanamhlanje.
Ipleyiti nganye iqulethe iincasa ezithambileyo, ezinye ezidityanisiweyo ngakumbi kwicandelo apho zidalwe khona, ezifana nencasa ye umtshato, ityuwa elunxwemeni kwanombala oqaqambileyo nevumba layo yonke into egqunywe lilanga eliqaqambileyo. Kwindaba ye Iintaba, ukubanda kunye neencasa ezinobumnandi obuncinci obukhatshwa ziintyatyambo, amagqabi kunye nezinye izinto ezivuselela ukutsha kunye noxolo lwendalo. Kwaye endaweni yoko, kweyakhe ummandla ophakathi, leyo ingqongwe zizakhiwo, iintshukumo zenkcubeko kunye nemekobume ye-ecliptic ngakumbi, ukutya kunye umoya wekamva kunye ongakholelekiyo imenyezela kwimilo, ukuchasana kunye nokuntsokotha kweemilo kunye nemibala.
Nangona kunjalo, konke oku akukude ukukwazi ukungcamla, kuba amajelo angaphandle anika ithuba yazi kwaye utye izitya zesintu kunye nemfuno yesizwe ngaphakathi nangaphandle kwePeru kumasebe ahlukeneyo okanye iindawo zokutyela zamazwe ngamazwe, ezivumela abantu basekhaya, iindwendwe kunye nabasemzini, ukuba banambitha, bazi kwaye bakhumbule incasa emangalisayo yalo mhlaba mkhulu.
Ngendlela enye, amaphepha anolwazi, amajelo eendaba kunye neenethiwekhi zentlalo, kunye nezixhobo zomsindo nokubonwayo ezibekwe kuthungelwano kunye neebhanile zedijithali zoluntu zihlala zikhona ezibonisa amalungiselelo kunye nesilumkiso sokuba yonke into enokuthi yenziwe iya kuba sisizathu esiyimfuneko sokuphinda sibuyele kwaye siqhubeke nokudala.
Kulo mongo kwaye ukuze ufumane indlela yokuncoma, ukulungiselela kunye nokwabelana ngezi zitya, iziselo, izimuncumuncu, iisuphu, ezomileyo. Utywala kunye neentlanzi, ukutya kwemyperuvian ikunikeza ngokubanzi uluhlu lweresiphi, amalungiselelo kunye nemiqondiso ukuze ungcamle ubumnandi kunye nobumnandi obumnandi EPeru funa wena.
Yiyo iphepha le-intanethi ezikhethekileyo kumboniso wezinto ezibanzi neziqinisekisiweyo ezahlukeneyo zokupheka, zonke zicwangciswe ngokuchanekileyo ukuze ungadingi ukuba ngumpheki omkhulu ukufikelela kwinqanaba lokwenziwa kwabapheki abadumileyo be EPeru. Nangona kunjalo, jonga nzulu ngakumbi kolu bhalo kwaye ufumane iinketho kunye neenzuzo onokuthi ngazo ukutya kwemyperuvian uya kufikelela
Njengoko kufundiswe ngaphambili, ukutya kwemyperuvian iboniswa njenge ujongano lwe-intanethi igcwaliswe nge amalungiselelo amaninzi kwimifuziselo, izitya zemveli kunye nezona zidumileyo zasePeru; kunye nokutya okugxininisekileyo, okukhaliphileyo, kwakudala, kwangoku kunye nokutya okwangoku esikunikwe sisixeko siphela kwaye uninzi luye lwavela ukuze lusenze sithakazelise ngoku.
Eli phepha lineenjini yokukhangela equlathe enkulu ikhathalogu yomxholo. Kule meko, kuya kubonwa amalungiselelo, iiresiphi, imiyalelo yenyathelo nenyathelo, kunye nengxelo emfutshane yembali kunye nezinye izibakala ezinomdla ezitya ezahlukeneyo ezisasazwa ngokwendawo yokulungiselela kunye nezithethe.
Ngale ndlela ilandelayo, i umxholo wephepha nokusasazwa kwayo:
Ukongeza, ibonelela nge-injini yokukhangela yobuqu apho ungangena khona ukukhangela imigca eyahlukeneyo kolu didi lulandelayo lwasekhitshini:
Esi sisitayela samva nje sasekhitshini EPeru kuba ithatha iiresiphi kwi ixesha elidlulileyo le-prehispanic ukuzidala ngokutsha, ukuhlangula nokuxabisa izithako zemveli zelizwe. Apha kuza ukutya kwemveli okunje ngetarwi, chuño, quinoa, kiwicha, moraya, cochayuyo, maca, coca kunye nerhanisi.
Kolu hlobo lokutya, i-injini yokukhangela iphosa zonke ezo zitya apho ilayisi yiba liqabane okanye ngokwenene, yiba sesona sithako siphambili. Enkosi kwi Ukufudukela kwelinye ilizwe laseCantonese, iincasa ezivela eAsia zadityaniswa kwaye zabangela ezinye iiresiphi ezivezwa ngaphakathi iphepha lewebhu ngokupheleleyo ukusuka ePeru kodwa ngeengcambu kunye nokungenelela okuvela kwamanye amazwe kwinqanaba elincinci.
Ubutyebi be intlanzi kwizilwanyana zasePeru, zinkulu, ngoko ke i-cuisine iqhelanise nobuncwane bendalo. Phakathi kolu hlobo kukho iintlobo ze-chupe, ezifana ne-ceviche, i-mussels ye-chalaca-style, i-tiradios kunye ne-seco.
Ukutya kweCreole kunexesha layo lokuqala XIX kwinkulungwane kwaye luhlobo lwemveli kwizixeko eziselunxwemeni ngexesha leViceroyalty yasePeru. Apha kutyhilwa konke ukutya phakathi kwenkulungwane Nge-XNUMX kunye ne-XNUMX kunye nobuchule, imbali kunye nezixhobo ezikhethekileyo.
Kulo mmandla ungasentla welizwe, njengoko yiAndes, ukutya kusekelwe iitapile, umbona kunye nemifuno ngesandla kunye nokwaziswa kwerayisi, isonka kunye ne-pasta kunye nenyama efana ne-lama, i-alpaca kunye nezilwanyana zasendle. Ngokusekelwe kwezi zithako kukuba iiresiphi eziphoswa kwiphepha kumthengi zenziwe
konke ukutya nge ukunxiba, iisosi kunye nolwelo Ihambelana nezitya zehlathi, ezihamba nemifuno eyomileyo kwaye ephekwe ngokucokisekileyo okanye ngaphandle kokuchaneka okukhulu.
Kolu khetho ngenisa olwahlukileyo ii-cocktails kunye neziselo ezinxilisayo. Kwakunye nawo onke amalungiselelo abandakanya izinto eziqinileyo ezinewayini okanye ezinye iimveliso ezivundisiweyo.
Ngaphakathi kwephepha unokukhangela iiresiphi zakho ngokusekelwe kwi Isithako esiyintloko ukusebenzisa, eya kubonisa yonke into iifomula ezikhoyo yale mveliso yinkwenkwezi.
Abo uninzi lwezithako ezifunwayo kwaye zisetyenzisiwe Zivezwa kwakamsinya, ke unombono wento omawuyijonge, elungelelaniswe kwinto eqhelekileyo kumalungiselelo ePeruvia.
Intlanzi, i-shellfish kunye ne-crustaceans
iguinea pigs okanye iguinea pigs
Zonke izitya ezivela ePeru zi ibalulekile nje kuluntu lwasekhaya nolwamazwe ngamazwe, nokuba kungenxa yembali yalo, imifuziselo okanye ngenxa yencasa yalo eyodwa nengenakuthelekiswa nanto.
Nangona kunjalo, kukho ezinye izitya eziphuma ngamandla ngakumbi ukuba zibe ilifa nesithethe saloo mzi. Ezinye zezi zifunyanwa zintywiliselwe ngaphakathi ukutya kwemyperuvian kwaye achazwa ngomonde nangokulibamba ixesha; izihloko zabo zezi zilandelayo:
irayisi yenkukhu enopopayi
Ipapa emfusa kunye nequinoa
umbona omfusa chicha
Zeziphi iiresiphi ze-injini yokukhangela?
ukutya kwemyperuvian iqulethe incwadi yeresiphi engaphezulu 100 iifomula isasazwe ngokohlobo lwesitya okanye isiselo esiza kuthunyelwa. Oku ngenjongo yokupapasha ummangaliso we-Peruvian cuisine, ubuncinci bayo, incasa, ukuhambelana, ivumba kunye nokuthungwa, okunika abantu basekuhlaleni kunye neendwendwe ithuba phonononga imbali nesithethe sayo kwiprizenteyishini enye.
Ngokufanayo, le website injongo yayo kukuvumela umphandi ngamnye lungisa izitya ezahlukeneyo kwindawo yokuthuthuzela naphi na apho ukhoyo, kunye nezona zithako ezilula kunye nezona zimnandi kunye nemali oyifunayo, ngoko akuyimfuneko ukuya kwindawo yokutyela kwaye rhoxisa iindleko eziphezulu kwezitya ezingokomfuziselo nezithobekileyo ezibonelela ngesixeko sasePeru.
Kwangokunjalo, sisixhobo esiphosa zonke iindwendwe zayo, zokupheka super lula into engekhoyo ngayo kufuneka ube ngoyena mpheki unamava ukuze uzivelise kwakhona. Into efunekayo iqala ngokutolika kakuhle kunye nokugxininiswa xa upheka, zonke izithako kunye nesimo sengqondo esihle xa uqala.
Kwimeko apho kukho umnqweno wokuseka naluphi na unxibelelwano neqonga, ukutya kwemyperuvian unayo iindlela ezilula kwaye zikhululekile zoqhagamshelwano ukuze ubonise amathandabuzo akho, iingxaki okanye iminqweno kubaphathi kunye nabaphathi bewebhu, abathi ngexesha elithile baya kuphendula isicelo sakho okanye ilungelo lakho ukuze ukuhlala kwakho kunye neemfuno zisonjululwe.
Olu nxibelelwano lunikezelwa njenge imo eyakhiwe ngolu hlobo lulandelayo:
igama: Le datha iyimfuneko ukukunika a Ubume kumnini wesicelo, njengoko kuya kuba yimfuno enyanzelekileyo yokubhekisa kumntu xa kuphendulwa okanye kufuneke ingqalelo
Imeyili ngekhompyutha: Abanini bephepha baya kuthumela iimpendulo kwi-imeyile yakho, yiyo loo nto le dilesi ibalulekile
Isihloko: Le yindawo apho uya kwabelwa khona umxholo okanye ingxoxo kumyalezo. Inesithuba esincinci ngoko inkcazo kufuneka ibemfutshane kwaye ichaneke
Mensaje: Kule ndawo unako xela Nakuphi na ukuphazamiseka okanye imfuno ekufuneka uyiphazamise. une Indawo enkulu apho unokuvakalisa khona ngentuthuzelo nangenkululeko yonke into esiphethe kakubi. Kodwa nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba ibe ngqo kunye neenkcukacha kwingxaki okanye umbuzo
Iiresiphi zokutya ezilungileyo zasePeruvia